Nepal Mountain Academy will be eligible to apply for up to 25% of the scholarship in the tuition fee if they meet the following criteria:
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । नेपालको पर्यटनलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्वन्धित सबै पक्ष सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ट्रेकिङ गाईड एशोसिएसन अफ नेपाल (टीगान)ले राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अधिकांशले ‘गुणस्तर शब्दमा नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने’मा जोड दिए ।
ओखलढुंगा (शेर्पाखबर) । गत जेठ ६ गते सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा दुधकुण्ड नगरपालिका १० टाप्टिङका २९ वर्षिय पेमारिन्जी शेर्पाको लेक लागेर मृत्यु भयो । आमालाप्चा पार गरेर मेरा पिक जाने क्रममा लेक लागेपछि फर्किने क्रममा उनको खारे भन्ने ठाउँमा ज्यान गयो ।
डाक्टर आरोही डा. निमा नामग्याल शेर्पा
ख्यालख्यालमैं डा. निमा नामग्याल शेर्पाले आइल्यान्ड पिक चढे । लोबुचे पनि चढे । आमादाब्लाम चढे । सन् २०१३ मा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढे, त्यसपछि मनास्लु पनि उक्लिए ।
ट्रेकिङ एजेन्सीहरुको लापरवाही कारण मानसरोबर गएका ८ जना तिर्थयात्रीको मृत्यु
सगरमाथा सपनामात्रै थिएन जीवन लक्ष्य होः आरोही छोकी शेर्पा
लुम्बिनीदेखि सगरमाथासम्मः बुद्ध वाज् बर्न नेपाल भन्ने नारासहित सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको सन्देशसहित यहाँहरुमाझ सम्मानित हुन पाउँदा आज म ज्यादै खुसी छु । यस अवसरमा मलाई यो महान अभियान सफल बनाउन मार्ग निर्देश गर्नुहुने, सहयोग, हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । मेरो सफलता सिंगो नेपाली नारीहरुको र यहाँहरुको सफलताको रुपमा बाँड्न चहान्छु ।
दिकी शेर्पाले सगरमाथा चढ्ने सपना पूरा गरेरै छाडिन्। दिकी सगरमाथा चढेर फर्किएपछि काठमाडौंमा पर्यटनमन्त्री मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवार र पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले सम्मान गरे। दिदीले खुसीको सास फेरिन्। सुनाइन्, ‘यस्तै मायाले त मलाई हिमालको एडिक्ट बनाएको हो।’